Amagama ekufuneka uwaphephe kwii-imeyile | Martech Zone
Amagama ekufuneka uwaphephe kwii-imeyile
NgoMvulo, Februwari 13, 2012 NgeCawa, ngoFebruwari 12, 2012 Douglas Karr
Ndizive ndibhetele kancinci malunga nemikhwa yam ye-imeyile emva kokufunda ukubona le infographic ivela eBoomerang. Umsebenzisi we-imeyile ophakathi ufumana imiyalezo eyi-147 yonke imihla, kwaye uchitha ngaphezulu kune I-2 kunye nesiqingatha seyure kwi-imeyile ngosuku. Ngelixa ndiyithanda i-imeyile njengophakathi kwaye sisebenza ukuyidibanisa njengesicwangciso kunye nabo bonke abathengi bethu, ezi ntlobo zezibalo kufuneka zikoyikise ekuguquleni indlela othengisa ngayo nge-imeyile.
akho umniki-ntengiso we-imeyile kufuneka inikezele ngokwahlulahlulwa kunye nokucwangciswa ukuze unciphise inani lemiyalezo oyithumelayo kwaye ujolise kubo… ukufumana ukuthembakala kunye nokuqwalaselwa ngababhalisi bakho. Ukuphuhliswa kweminyhadala yemiyalezo enzima kunye nezinto ezinokubangela kunokufezekiswa kusetyenziswa ukuzenzekela ngokuzenzekelayo injini.
Nokuba yeyiphi na indlela, uya kuthintela ukubophelela i-imeyile yonke enkunkumeni… okanye okubi… kwifolda ye-imeyile engabalulekanga!
Le infographic ivela Boomerang, iplagi ye-imeyile yeGmail. Nge-Boomerang, ungabhala i-imeyile ngoku kwaye uyihlelele ukuba ithunyelwe ngokuzenzekelayo ngexesha elifanelekileyo. Bhala nje umyalezo ngendlela oqhele ukwenza ngayo, emva koko ucofe iqhosha elithi Thumela Kamva. Sebenzisa isikhethi sethu esiluncedo kwikhalenda okanye ibhokisi yethu yokubhaliweyo eqondayo ulwimi olufana "noMvulo olandelayo" ukuxelela uBoomerang ukuba awuthumele nini umyalezo wakho. Siza kuyithatha ukusuka apho.
Isikhokelo seMivuzo yezeNtlalontle
Iindlela ezi-3 zokuSebenzisa uPhando kuPhando oluNgcono lweNtengiso
Feb 13, 2012 ngo-11: 10 AM
Ukuba ukufumana imiyalezo eyi-12 kuguqulela kwimizuzu engama-90 yomsebenzi, ithetha ukuthini loo nto? Kwaye kutheni ungasebenza kwiinkqubo ngaphandle kwenkqubo ye-imeyile ngokwayo ibe yinxalenye ye-infographic yakho malunga ne-imeyile?
Feb 13, 2012 ngo-11: 18 AM
Molo @ariherzog:disqus ! Sabelana nge-infographic kaBoomerang apha kwaye siphawula ngayo… ayiyoyethu. Ngokuphathelele umsebenzi ongaphandle kwe-imeyile, ndiyakholelwa ukuba bazama ukubonelela ngokujonga kwimizamo eyongezelelweyo eyenzelwe umsebenzisi oqhelekileyo xa efunda i-imeyile. Ii-imeyile esizifumanayo zifuna ukuba senze umsebenzi phambi kokuba siphendule. Nantso ingongoma. Imeko kwinqanaba, ndifumene inqaku lakho njenge-imeyile, ifuna ukuba ndiphonononge i-infographic kwakhona kwaye ndikuphendule. Ngelixa loo nto ingengomsebenzi we-imeyile, yenziwe ngenxa ye-imeyile eya kum.
Feb 13, 2012 ngo-1: 40 PM
Enkosi ngokwabelana nge-infographic Doug yethu. ILemon.ly ibe nexesha elimnandi lokusebenzisana neBoomerang.
Feb 15, 2012 ngo-11: 12 AM
Akukho mathandabuzo ukuba sonke songanyelwe yi-imeyile yethu ye-imeyile. Yiyo loo nto kubalulekile ukuba abathengisi banqande ingxolo. Ukwazi ukuba leliphi ixesha lokuthumela kuluncedo. Yivavanye ukuze ufumanise ukuba leliphi ixesha eliphumela kwelona qondo livulelekileyo.